Incwadi kaAniko emangalisayo yokuGubungela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Incwadi ekhethekileyo ka-Aniko igubungela
UAniko ngu Umzekelo webali lokufumana iphupha lakho Kwaye ukwazi ukuyenza xa unoxinzelelo kumacala ahlukeneyo aphantse akunyanzele ukuba ufunde into ongayihoyi kakhulu okanye ongayithandiyo.
Umzobi ozinikele ngokupheleleyo ngoku yenza amaqweqwe akhethekileyo ngomxholo ojolise kuwo kumnandi Kwaye oko wabonisa umsebenzi wakhe kwiiwebhusayithi ezininzi ezikwi-Intanethi, izibonelelo ziye zana ukuna zixakekile kwiinyanga ezintandathu ezizayo.
Umfundi wezakhiwo, waye ndisebenza kwizitudiyo ezahlukeneyo zoyilo de wangaba mfutshane okanye wonqena, wazama enye yeemvakalelo zakhe kwaye ayisiyonto eyenye ngaphandle kokwenza ezo zinto zibalulekileyo zohlobo lweencwadi ezinento yokwenza nefantasy.
Ngomxholo ocacileyo apho kuvela khona iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezinjengeendlulamthi, iimpungutye okanye inamba yomntwana, uAniko ubonakalisa amandla okusishiya simangalisiwe ngumsebenzi wakhe. Ngokuqinisekileyo umsebenzi oyintloko, owl, izakufumana okwexeshana, njengoko ikhupha umgangatho omkhulu kwaye ikubamba nolo jongo.
U-Aniko uzisa kwiphepha loncwadi a Umfanekiso odongwe Ezimeleyo yenza uhlelo olukhethekileyo olunokugqibelela njengesipho sothandekayo. Kukho imisebenzi emininzi anayo kwaye nakweyiphi na enye sinokuzibolekisa ukujonga iinkcukacha zayo kwaye luyintoni ubuhle obuhle.
Ndiyakushiya i-Etsy yakho ukuze ukuxabise okuseleyo, kodwa inyani yile Kunzima ukukhetha into oyithandayo, kuba nehashe lihle nje. Umsebenzi omkhulu kwiinkcukacha ezinje ngala hlobo lwezinto zokuhombisa, okanye sisiphumo osinikayo, esikwaziyo ukubeka intambo.
Ngamanye amacandelo kodwa ngaphakathi kwefantasy, ungasondela ukuya kuAmundsen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Incwadi ekhethekileyo ka-Aniko igubungela
I-Disney Pstrong ityhila abalinganiswa abatsha abathandekayo 'Ukufumana iDory'
I-Moerkey ijika amaqhosha amadala kunye neengqekembe kubugcisa obonyuswe ngebhayisikile